March 20, 2019 Zakarie Abdi
Filimka weyn Marakkar: Arabikadalinte Simham ayaa shaaca laga qaaday in Christmas 2019 la daawanayo ama bisha December ee dabyaaqada sanadkan Superstar Mohanlal oo hogaamiye ka ah mashruucaan Malayam ama Mollywood sameeyeen ayaa si rasmi ah u sheegay in shaqada filimka Marakkar oo socotay 110-maalmood soo idlaatay waxaana ku wehliyaan oo doorar muhiim ah filimkan ku leh Suniel Shetty, Prabhudeva, Keerthy Suresh, Kalyani Priyadarshan and Pranav iyo kuwo kale sidoo kalena Priyadarshan ayaa Director ka ah.
Alia Bhatt: waxaan jiray 9-sano markii ugu horeesay ee aan xafiiska mudane Sanjay Leela Bhansali booqday waan yara cabsanaayay xiligaas balse waxaan niyada ku haayay mar un filimkiisa inaan sameyn doono haatan ayay riyadaas run ii noqotay madaama filimkiisa Inshallah aan Salman Khan la sameenayo balse mudo dheer ayaan sugaayay la shaqeynta Bhansali.
Kangana Ranaut maba nasan doonto xili dhalasheeda ku beegan tahay 23-ka bishan wax xaflad ah ma dhigan doonto ayadoo ku mashquulsan duubista muuqaalo lagu xayeysiisanyo filimkooda Mental Hai Kya oo ay Rajkumar Rao isla jilayaan.
Vicky Kaushal: Sridevi kale Bollywood-ka masoo mari doonto 1000-ka sano ee oo socoto waxay ahayd atirisho qof walbo ka saameyn badan kana tagtay dhaxal lama taabtaan ah. Sidaas ayuu Vicky Kaushal ka yiri xalay xafladii Zee Cine Awards 2019 ee Bollywood-ka isugu imaadeen.
Akshay Kumar oo fariin dhiiri galin iyo weli inuusan is dhiibin dhalinyarada Bollywood-ka u diray inkastoo 50-jir uu yahay wuxuuna yiri “Hadda waxaan ordaa 10 km halka markii hore aan ordi jiray 5 km, waxaa lagaa rabaa inaad dhalinta la tartantid kuwaas oo hadda saaxada soo koreen.
Filim soo saare Boney Kapoor ayaa shaaca ka qaaday in filimka hirgalay Badhai Ho xuquuqdiisa uu iibsaday sidoo kalena asigoo Tamil, Telugu, Kannada iyo Malayam ah sameyn doono.
Inaba caadi ma ahan heeska kowaad filimka Kalank laga soo bandhigay Ghar More Pardesiya waxaa daawadaan 15m oo qof barta Youtube-ka mudo 24-saac ah:
Filimka Hollywood-ka ah Hellboy ayaa si rasmi ah shaaca looga qaaday in gudaha Hindiya laga daawan doono 5 April 2019 sidoo kalena John Abraham filimkiisa RAW isagana 12 April 2019 ayaa la daawan doonaa hal todobaad ayuu dib u dhacay.
Xil dhibaanad Jaya Bachchan ahna atirisho ka tirsan Bollywood-ka sidoo kalena u dhaxdo Superstar Amitabh Bachchan ayaa canaanatay qof sawir iyada ka qaaday fasax la’aan!
Riteish Deshmukh, Sidharth Malhotra, Tara Sutari iyo Rakul Pureet ayaa si rasmi ah ugu dabaal dageen soo gaba gabeynta duubista filimkooda Marjaavan lana daawan doono 2 Oct 2019 maalinta Gaandi dhashay.